China self-ukuncela isihlungi imaski ifektri kanye nabaphakeli | Zhongxing
Isihlungi sokuzivikela sesihlungi esizisebenzelayo sinomsebenzi wokuhlunga izinhlayiya ezingekho oily ezifana nothuli, intuthu, inkungu kanye nama-microorganisms; inikezwa ngendlela engeyona eyinyumba. Ukumelana nokuhamba komoya kungaphansi kuka-110Pa, ukusebenza kahle kokuhlunga kwezinhlayiya ezingekho oily kungaphezu kwama-95%, nokusebenza kahle kokuhlunga kwamagciwane kungaphezu kwama-95%.
Lo mkhiqizo ulungele ukuzivikela kokuhlunga ngokwakho izinhlayiya ezingekho oily ezifana nothuli, inkungu ye-asidi, inkungu yokupenda, ama-microorganisms nokunye emoyeni.
Ukupakisha okuzimele kwamamaski okuhlinzwa wezokwelapha
Izimaski zokuhlinza ngokwezokwelapha amaphakheji angama-50
Isihlungi sokuzivikela sesihlungi esizisebenzelayo sinezici ezilandelayo:
1. Isendlalelo sangaphandle sesifihla-buso senziwe ngezinto ze-polypropylene engeyona enobuthi, okuyindwangu enkulu engavukelwanga ngamanzi engangeni manzi;
2. Isendlalelo sangaphakathi semaski senziwe ikakhulukazi ngezinto ezingekho ezinobuthi ze-polypropylene, ukotini womoya oshisayo we-ES kanye nendwangu ye-viscose engeyona eyelukiweyo enomoya osondelene nayo;
3. Isici sesihlungi semaski sisebenzisa izingqimba ezimbili zendwangu engalukwanga ene-ultra-fine encibilikisiwe eye yaphathwa ngogesi, futhi ukusebenza kahle kokuhlunga kwamagciwane kufinyelela ngaphezu kuka-95%;
4. Isiqeshana sekhala leplastikhi emzimbeni womaski singalungiswa ngokuthanda ngesikhathi senqubo yokugqoka, futhi sikulungele futhi sikhululekile ukugqoka;
5. Idizayini enezinhlangothi ezintathu yemaski, ukumelana nokuphefumula ngesikhathi sokugqoka kungaphansi kwe-110Pa, hhayi okuxinile;
6. Lo mkhiqizo usebenzisa ubuchwepheshe obungenamthungo bokucindezela ubuchwepheshe kanye nobuchwepheshe be-welding be-ultrasonic ukwenza imaski ithambe, iqine futhi ibe yinhle.
Izimaski zokuvikela isihlungi esizisebenzelayo ikakhulukazi zisetshenziselwa ukuvikela abantu ezindaweni lapho umoya ungcoliswe izinhlayiya ezingekho uwoyela ezinjengothuli, intuthu, inkungu kanye nezilwanyana ezincane. Izindlela eziyinhloko zokusetshenziswa yilezi:
Ungawasebenzisa kanjani amasiki ochungechunge lwe-N95xx earband:
1. Vula iphakethe ukhiphe isifihla-buso, isiqeshana sempumulo ngaphandle, udonse umucu owodwa wezindlebe ngezandla zombili, uqiniseke ukuthi isiqeshana sempumulo siphezulu, njengoba kukhonjisiwe ku-Figure 1 ngezansi;
2. Faka isifihla-buso, faka isilevu sakho ngaphakathi kwesifihla-buso, bese ubopha imichilo yezindlebe ngemuva kwezindlebe zakho ngezandla zombili, njengoba kukhonjisiwe kuMdwebo 2 ngezansi;
3. Lungisa endaweni ekahle ukuze imaski ilingane nobuso, njengoba kukhonjisiwe kuMdwebo 3 ngezansi
4. Cindezela inkomba neminwe emaphakathi yezandla zombili ukulungisa isiqeshana sekhala kuze kube siseduze nebhuloho lekhala, njengoba kukhonjisiwe kuMdwebo 4 ngezansi
5.Ngaso sonke isikhathi uma ufaka imaski futhi ungena endaweni yomsebenzi, kufanele wenze isheke lokuqina. Indlela yokuhlola ukumboza ngokuphelele imaski evikelayo ngezandla zakho bese ukhipha umoya ngokushesha, njengoba kukhonjisiwe ku-Figure 5 ngezansi. Uma kukhona ukuvuza komoya eduze kwesiqeshana sekhala, landela izinyathelo 4) Lungisa isiqeshana samakhala kuze kube akukho ukuvuza komoya.
Kusetshenziswa indlela ye-N9501 headband series mask:
1. Vula iphakethe ukhiphe isifihla-buso, phakamisa uhlangothi lwemaski ngesiqeshana sekhala, wenze isiqeshana sempumulo sibheke phezulu, nebhande lekhanda lizoxhomeka ngokwemvelo, njengoba kukhonjisiwe ku-Figure 1 ngezansi;
2. Gqoka isifihla-buso, faka isilevu ngaphakathi kwesifihla-buso ukuze siseduze nobuso, sisebenzise isandla esisodwa ukudlula emabhande amabili ekhanda, bese usebenzisa esinye isandla ukuqala ukudonsa ibhande langaphansi ulibhekise ngemuva kwekhanda bese ubeka entanyeni, Njengoba kukhonjisiwe kuMfanekiso 2 ngezansi;
3. Donsela ibhande lekhanda elingaphezulu ngemuva kwekhanda bese ulibeka phezulu kwezindlebe zangemuva kwekhanda, njengoba kukhonjisiwe kuMdwebo 3 ngezansi;
4. Cindezela inkomba neminwe emaphakathi yezandla zombili ukulungisa isiqeshana sekhala kuze kube siseduze nebhuloho lekhala, njengoba kukhonjisiwe kuMdwebo 4 ngezansi;
5.Ngaso sonke isikhathi uma ufaka imaski futhi ungena endaweni yomsebenzi, kufanele wenze isheke lokuqina. Indlela yokuhlola ukumboza ngokuphelele imaski evikelayo ngezandla zakho bese ukhipha umoya ngokushesha, njengoba kukhonjisiwe kuMfanekiso 5 ngenhla. Uma kukhona ukuvuza komoya eduze kwesiqeshana sekhala, landela izinyathelo 4) Phinda ulungise isiqeshana sekhala. Uma ukuvuza komoya kutholakala nxazonke, lungisa ibhande lekhanda bese uphinda izinyathelo 1) kuye ku-4) ize ingavuzi.
Igama lomkhiqizo Isifihla-buso sokuzivikela sesihlungi esizimele
Imodeli Uhlobo lwe-N9501 Earband / N9501 Headband Type
Imininingwane 180mm×120mm / 160mm×105mm / 140mm×95mm
Igama lomkhiqizo Shaohu
Izinto Indwangu ye-polypropylene engalukiwe, ES ukotini womoya oshisayo
Izinga lokuhlunga kwamagciwane ≥95 amaphesenti
Izinga lokuhlunga lezinhlayiya ezingekho oily ≥95%
Ihambisana nenombolo ejwayelekile GB 2626-2019
Imininingwane yokupakisha ukupakisha kwesikhwama sephepha lepulasitiki, ucezu olu-1 esikhwameni ngasinye
Umsebenzi Vimbela izinhlayiya ezingekho oily ezifana nothuli, intuthu, inkungu kanye nezilwanyana ezincane
Umsuka Jiangsu, China
Umkhiqizi IHuaian Zhongxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Langaphambilini Imaski yezokwelapha engalahlwanga
Olandelayo: 84 isibulala-magciwane
Imaski eluhlaza okwesibhakabhaka elahlwayo
Alahlwayo Medical Face Imaski
Alahlwayo imaski Medical
Alahlwayo Umlomo Mask
Imaski elahlwayo yezokwelapha
I-Mask elahlwayo ephinki
Imaski Yenzalo Yesithathu
Alahlwayo Medical Face Imaski, Imaski Yama-antiviral, Inzalo Ukotini Swab, Imaski ephefumula, Ukotini Wezokwelapha, Isihlengikazi Pad,